महँगो बन्दै हाउजिङ | गृहपृष्ठ
Home महँगो बन्दै हाउजिङ
महँगो बन्दै हाउजिङ
काठमाडौं । राजधानी केन्द्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गर्दा उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्घिदर तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । त्यस्तै, बसाइसराइ गरेर उपत्यकामा आउनेको सङ्ख्या पनि उच्च छ । यसले आवासीय प्रयोजनको जमीन घट्दै गएकाले घरजग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । त्यसै पनि माग अधिक र आपूर्ति सीमित हुँदा बजार सिद्धान्तअनुरूप घरजग्गा महँगो बन्दै गएको हो । साथै, अस्वाभाविक रूपमा जग्गाको चर्को मूल्यवृद्धि गराएर रातारात ‘मालामाल’ हुन खोज्ने गिरोह पनि सक्रिय छ । बैनामाथि बैना गरेर घरजग्गाको मूल्य दिनदिनै बढाएर कारोबार प्रोत्साहित गर्ने यस्ता गिरोहका कारण जग्गा छोइनसक्नु महँगो भएको छ ।
घरजग्गामा भएको महँगीको असर हाउजिङ परियोजनाभित्रका घरमा पनि परेको छ । नयाँ भवन आचारसंहिता २०७२ अनुसार हाउजिङ कम्पनीले पहिलेको भन्दा धेरै जग्गा हाउजिङका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बताए । जग्गाको मूल्य तथा यस प्रावधानले हाल निर्माण भइरहेका हाउजिङको मूल्य केही बढेको उनको भनाइ छ ।
सानो क्षेत्रफलका हाउजिङको मूल्य २ करोडसम्म
अहिले एकल परिवारका लागि हाउजिङमा घर किन्न आउनेहरू धेरै रहेको व्यवसायी बताँउछन् । काठमाडौं केन्द्रित सबैजसो हाउजिङ डेभलपरहरूले अहिले साना प्लटका प्रडक्ट नै धेरै ल्याएका छन् । रोड शो रियल इस्टेट, बृहत् ग्रूप, डाउनटाउन हाउजिङ, सीई ग्रूप, पद्मा ग्रूप, सीजी प्रपर्टिज्लगायत पछिल्लोे समय नयाँ हाउजिङ परियोजना ल्याएका सक्रिय रियल इस्टेट कम्पनीहरू हुन् । यी कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार हाल निर्माणाधीन हाउजिङमा साढे २ देखि ४ आनासम्मको प्लटमा बनेका इकाइ नै धेरै छन् । यति जग्गामा बनेका घरको मूल्य न्यूनतम मूल्य १ करोड १० लाखदेखि साढे २ करोडको रेञ्जमा छ ।
प्रिमियम हाउजिङको मूल्य ७ करोडसम्म
निर्माणाधीन हाउजिङ परियोजनाहरूमा ४ आनाभन्दा माथि ६ देखि साढे ६ आनासम्मको प्लटमा बनेका घरहरू छन् । यो रेञ्जका घरको मूल्य करीब २ करोड ५० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँ छ । त्योभन्दा माथि १ रोपनीसम्मको प्लट राखेर उच्च वर्गका लागि प्रिमियम इकाइ पनि डेभलपरले केही हाउजिङ परियोजनामा राखेका छन, जसको मूल्य ७ करोड रुपैयाँसम्म रहेको देखिएको छ । अधिकांश हाउजिङ कम्पनीले ठूला प्लट खोज्दै आउने ग्राहकका लागि भनेर प्लट नै खाली राख्ने गरेका छन् । सीई कन्ष्ट्रक्शनका बिजनेश डेभलपमेण्ट म्यानेजर सुजन घिमिरेका अनुसार ठूलो प्लटमा घर बनाउँदा महँगो पर्ने भएकाले त्यस्तो घर खोज्नेले डिजाइन पनि आफ्नो चाहनाअनुसार राख्न चाहने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले, यस्ता घरहरू पहिले नै बनाएर नराखिने उनले बताए ।
कही नेता हरु को लगानी त छैन ? स्मार्ट सिटी को नाउ मा जग्गा ब्लोक्क गरेर अप्राकृतिक रुपमा उनी हरु कमाई गरी रहे को त छैन ? यस माथी खोज पत्रिका ले खोज बिन गर्ने हो कि ?